CAF : Ny tsiambaratelon’i Ahmad
lundi, 20 mars 2017 09:22
Herinandro aty aorian’ny fifidianana dia mbola tsy afaka ambavan’ny maro manerana an’izao tontolo izao ny nahavoafidy an’i Ahmad, izay filohan’ny Federasionan’ny kitra malagasy na Fmf, ho eo amin’ny toeran’ny filohan’ny Konfederasiona afrikanin’ny baolina kitra na ny Caf mandritra ny efatra taona.
Ho an’ny mpiray tanindrazana na ny mpanao gazety dia nizarazara be ihany ny hevitra. Tao ireo faly fa lasan’ny tera-tany malagasy ny toerana ary miandrandra fanavaozana, eo koa ireo faly fa tsy mitantana ny Fmf intsony i Ahmad. Maro mantsy no mihevitra fa noho ny tsy fahombiazan’ny Fmf no tsy mampandroso ny kitra malagasy. Teo ihany koa ireo izay manenjika fotsiny an’ i Ahmad ka manatsatso ny ezaka vitany ary mihevitra fa tsy dia misy dikany io fahalaniany eo anivon’ny Caf io.
Tsy tonga tonga ho azy anefa io fahalanian’i Ahmad io fa misy antony maromaro ireto izay ho tanisana eto satria tsara ho fantatry ny mpanaraka ny kitra malagasy.
Ny voalohany amin’izany dia efa 29 taona no nitondra ny Caf i Issa Hayatou, izay filoha tompon-toerana nifaninana tamin’i Ahmad. Ny fanirian’ny mpikambana eo anivon’ity sehatra mitantana ny kitra afrikanina ity hitondra fanavaozana sy fanovana ny mpitondra ny Caf mba ho tanora kokoa dia anisan’ny tombony ho an’i Ahmad. Issa Hayatou sy ireo mpiara-miasa aminy mantsy dia efa saika mihoatra ny 70 taona na 80 taona avokoa, raha mbola 58 taona kosa i Ahmad.
Antony faharoa ary anisany tena lehibe dia lasa tombony ho an’i Ahmad ny disadisa nisy teo amin’i Issa Haytou sy Gianni Infantino, filohan’ny Federasiona iraisam-pirenena ny kitra na ny Fifa. Tsy nanohana an’i Gianni Infantino mantsy i Issa Haytou sy ny namany sasan-tsasany taty Afrika nandritra ny fifidianana izay ho filohan’ny Fifa. Mba ho ireo firenena nifidy azy dia nanao fitsidihana taty Afrika i Gianni Infantino no sady nampanantena fa hampitombo ny isan’ny ekipa afrikanina handray anjara amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany ho sivy. Eo ihany koa ny fampitomboana ny vola fanampiana ireo federasiona. Azo eritreretina noho izany fa na tsy niteny mivantana aza i Gianni Infantino dia inoana marimarina fa tsy nanohana ny filatsahan’i Issa Haytou mihitsy izy fa nanao pi-maso hoan’i Ahmad.
Nandritra ny laha-teny nataon’ny telo tonta tany Addis-Abeba dia efa nahatsapana izany koa. Raha nandray fitenenana i Issa Haytou dia notsindriany mafy ny tsy handraisan’ny Afrikanina lesona avy amin’ny mpanjanaka intsony. Tetsy ankilany kosa i Gianni Infantino, izay marihina fa eropeana dia namaly ihany koa fa tsy manaiky ny hitsabatsabahan’ny resaka politika ny fitantanana ny kitra aty Afrika. Toy ireny laha-teny mifampitifitra ireny ny nataon’ny filoha roa tonta ka tonga dia naha ratsy endrika ny filohan’ny Caf avy hatrany izany kanefa ny fifidianana mbola hatao. Tetsy ankilany kosa raha nandray ny fitenenana i Ahmad izay nataony tamin’ny teny frantsay, angilisy, portigey ary arabo dia lahateny nampiravona no nataony ka nampiverina ny fitokisan’ireo tany miteny frantsay sy Afrika andrefana izay efa niraviravy tanana tamin’ny Caf izany.
Antony iray fahatelo dia ny traik’efa ara-politika ananan’i Ahmad. Anisan’ireo olon-dehibe taty Afrika izay tsy azo nohozongozonina mihitsy i Issa Haytou. Ny anaram-bositra nomena azy aza moa dia hoe Baobab Afrika. Tsy nisy nahasahy nikitika izy noho izany. Izay no manazava ilay fotoam-piasana im-7 miatoana vitany. Ny fahalanian’i Gianni Infantino hitantana ny Fifa anefa dia nanova ny tanjany. Hitan’i Ahmad io lesoka io ka nanomboka nitsiry ny heviny tany Mexique tamin’ny taona 2015 niaraka tamin’ireo namany ao amin’ny Cosafa na ny firenena afrikanina aty atsimo atsinanana sy ireo firenena miteny anglisy izay tsy nahazohazo an’i Issa Haytou. Ny tsy nahafahan’i Jacques Anouma, nilatsaka ho fidiana ho filohan’ny Caf ihany koa dia vao maika nanamora ny fandresen’i Ahmad. Nangingina ny fampielezan-kevitra nataony saingy nahomby nanoloana ireo fitantanana izay nampitaraina ny maro tamin’ny nafitsok’i Issa Haytou sy ny namany.
Nitady olom-baovao ny Caf sy ny Fifa ary Ahmad irery no nanana fahasahiana nandavo ilay Baobab Afrika ka izany no antony nandreseny. Maro ny Malagasy no tsy nanam-po izany satria nahita ny tsy fahombiazan’ny kitra malagasy fa noporofoin’i Ahmad kosa fa tsy izy no tsy mahomby. Arakaraka ny nanenjehana azy hatrizay vao maika nampisodrotra azy.
Raha tsy mandeha ny kitra malagasy dia maro ny antony fa tsy noho ny fitantanan’ny Fmf irery. Laharam-pahamehan’ny fanjakana malagasy ve aloha ny fampiroboroboan'ny fanatanjahantena ? Manam-bola ho amin’izany ve isika hanamboarana foto-drafitr’asa sy hamatsiana ireo atletatsika ?